Godinaalee Oromiyaa Adda Addaa keessatti Hiriirri Mormii Geggeessamaa Jira: Jiraattota – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioGodinaalee Oromiyaa Adda Addaa keessatti Hiriirri Mormii Geggeessamaa Jira: Jiraattota
Mormii Oromiyaa keessaa
WAASHINGITAN, DIISII — Godinalee Oromiyaa garaa garaa keessatti har’a hiriirri mormii geggeessamuu isaa jiraattonni nuuf ibsanii jidran. Akkuma kanaan Godina Qelleem Wallaggaa, aanaa Hawwaa galaan, Godina shawaa lixaa aanaa Baakkoo Tiibbee, Horroo Goduruu magaalaa Shaambuu irraa namoota dubbisnee jirra.
Horroo Guduruu magaala shaambuu keessatti uummati konkolaataa sukkaara fe’atee magaalattii dhaa ba’aa ture dhaabsisuuf yaalii godheen lubbuun namaa baduun gabaasamee jira.
Gama biraan godina Horroo Guduruu wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti konkolaataan sukkaara fe’atee deemaa tokko magaalaa dhaa akka hin bane uummataan dhaabsisamuu isaa jiraattonni dubbatanii jrian.
Sukkaarri fe’ame kun kontorbaandii waan ta’eef ba’uu hin qabu jechuu dhaan dura dhaabbannaa uummati godheen humnoonni ittisa biyyaa dhukaasa bananiin lubbuun nama tokkoo darbuu jiraataan magaalaa shaambuu ibsanii jiran. Angawoonni godinattii garuu deebii kennuuf fedhii hin agarsiisne.